Kirooyinka guryaha Dadweynaha - Tenants Victoria
Waa maxay kiradu?
Sharciga kireysiga ee Victoria, Kiro waxaa loo qeexaa ‘caddadka lacag ah ee uu siiyey mulkiilaha kireystuhu si loo buuxiyo guryaha ijaarka ah iyo isticmaalka tas- hiilaadka iyo adeegyada’.
Guryaha dadweynaha, kiradu waxay leedahay laba micne oo kala duwan:
Kirada suuqa waa kirada aad ka bixineyso guriga haddii laga heli karo suuqa kirada guryaha gaar ah. Kirada suuqa ee guri kasta waa dejiya Qiimeeyaha Guud ee Victoria.
Si kastaba ha ahaatee, kireystayaasha dadweyne badan ayaa hela lacag dhimista kirada suuqa. Lacag celinta waa qadar lacag ah oo laga gooyo ama laga jaray kirada suuqa si ay uga dhigaan kirada mid aad loo awoodi karo.
Kirada la dhimay waa kirada aad dhab ahaan u bixiso marka lacag dhimista lagu sameeyo kirada suuqa.
Sidee baa kirada la dhimay loo xisaabiyaa?
Kirada la dhimay waxaa loo xisaabiyaa ka qayb ahaan wadarta dakhliga guriga oo ku saleysan dhakhliga dhammaan xubnaha guriga.
Si loo go’aamiyo kirada la dhimay, saddex nooc oo dakhli ah ayaa la tixgeliyaa. Kuwani waa:
Dakhliga aasaasiga ah – sida mushahaarka toddobaad laha ah iyo mushaarka bilaha ah, lacagta hawlgabka, lacagaha kale, gunooyinka, lacagta markaad hawlgabka noqoto, lacagta halka mar la bixiyo, dulsaarka keydkaaga, ama dakhliga kaa soo gala maalgelinta
Dakhliga loola dhaqmo – si wax dhimid ah – sida lacagta cashuurta qoyska oo ay bixiso Centrelink iyo lacagta uu bixiyo waalidka aan la nooleyn ilmaha ee midkood Hay’ada Taageerada Ilmaha ama waalidka aan masuulka ka ahayn
Dakhliga aan la xisaabin – sida lacagaha dadka dalka usoo dagaalamay
Kirada la dhimay waxaa asal ahaan loo xisaabiyaa sidii boqolkiiba 25 dakhliga aasaasiga ah ee dadka guriga degan oo lagu daray boqolkiiba 15 dakhliga loola dhaqmo –si lacag dhimis ah.
Intee jeer bay korortaa kiradeydu?
Guryaha dadweynaha, kirada suuqa waxaa loo qiimeeyaa 12 bilood ee kasta.
Haddii kiradaada suuqu ay kororto, waa inaad heshaa ogeysiin caadi ah oo ah kororka kirada. Haddii aad rumeysan tahay in kororku inuu ka dhigayo kirada suuqaaga mid aad u badan (taas oo ah mid aad u sareysa), waxaad dalban kartaa Director of Consumer Affairs ee qiimeynta kirada. Kireystayaasha dad weynaha badidoodu ma raadiyo qiimeynta kirada suuqooda sababtoo ah wax isbedel ah kuma keenayso kiradooda la dhimay.
Kirada la dhimay waxaa loo dejiyey laba jeer sannadkii oo ku saleysan dakhliga guriga ee wakhtigaas iyo wuxuu go’an yahay oo uusan isbedelaynin ilaa iyo 26 toddobaad (xitaa haddii dakhliga gurigu uu kordho inta u dhaxeysa qiimeynaha).
Si kastaba ha ahaatee, haddii dakhliga gurigu uu hoos u dhaco inta u dhaxeysa qiimeynaha ka dibna kireystayaasha waxay dalban karaan in kiradooda la dhamey la yareeyo.
Wakhti kasta oo la qiimeeyo kiradaada la dhimay, waxaad ka heli doontaa warqad Director of Housing oo ku weydiinaya inaad xaqiijiso dakhligaaga guriga.
Aad bay muhiim kuugu tahay si aad ugu jeegareyso warqadan si taxadar leh. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in dhammaan faahfaahinta ay sax iyo tii ugu danbeysay. Haddii faahfaahinta dakhligu aysan sax ahayn waa inaad la xiriirtaa xafiiska guryaha ee xaafadaada sida ugu dhakhsaha badan si loo saxo faahfaahinta.
Waxaa laga yaabaa in lagaa doonayo inaad timaado xafiiskaaga guriga ee xaafada si aad u bixiso xaqiijinta iyo caddeynta dakhligaaga ee qiimeyn kasta.
Waa muhiim inaad u jawaabto codsi kasta oo kaaga yimaada Director of Housing si aad u xaqiijisid faahfaahinta dakhligaaga. Haddii Director of Housing uusan helin xaqiijinta dakhligaaga, waxaa laga yaabaa in lagaala noqdo lacag dhimistaada, oo aad gasho in lacag kugu ururto oo aad ku danbeyso in guriga lagaa saaro.
Haddii aad ka qaadato dakhli Centrelink waxaad saxiixi kartaa adeega xaqiijinta dakhliga. Taas micnaheedu waxaa weeye in xaqiijinta dakhligaagu uu si toos uga yimaado Centrelink ilaa Director of Housing. Wakhti kasta lacagtaada hawlgabka ama lacagtu ay isbedesho in macluumaadka loo gudbiyo Director of Housing si loo hubiyo inay heystaan faahfaahinta dakhliga saxda ah markay sameeyaan qiimeynta kirada la dhimmay.
Waxaa jira tiro qorshayaal kala duwan oo saameeya sida dakhligu loola dhaqmo iyo sida kiradaada la dhimay loo xisaabiyo. Haddii aadan u maleynaynin Director of Housing waxay u xisaabisay kiradaada la dhimay si sax ah waa inaad la xiriirtaa Tenants Union/Tenants Victoria wixii tallo ah 1800 068 860
Ka waran haddii aan diido qiimeynta kirada Director of Housing?
Haddii aad u maleynaysid in Director of Housing inaysan u xisaabin kiradaada si sax ah waa inaad bilowdaa iskudeyda inaad xilliso arinta xafiiskaaga guryaha ee xaafadaada. Haddii aad heshiis la gaarto xafiiska guryaha ee xafiiskaaga waa inaad weydiisaa inay kuugu xaqiijiso heshiiska qoraal ahaan.
Haddii aadan la xallin karin arintan xafiiska guryaha ee xaafadaada, waxaad kadib sameyn kartaa cabasho toos ah.
Waa bilaash inaad sameyso cabasho waxaanad sidaa ka sameyn kartaa sidaas qof ahaan xafiiska guryaha ee xafiiska, qoraal, ama taleefan. Haddii aad qabto wax su’aalo ah ama aad u baahan tahay caawimaad si aad u soo xereyso cabashadaada, kala xiriir Housing Complaints Management Unit.
Director of Housing wuxuu sidoo kale leeyahay nidaam racfaan. Waxaad dalban kartaa racfaan gudaha ah haddii aad u maleynaysid in Director of Housing aanu dabakhin qorshihiisa iyo nidaamka oo si hagaagsan leh ama haddii aad u malayneysid inay khalad sameeyeen xagga xisaabinta kiradaada la dhimay.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan nidaamka racfaanka gudaha eeg warqadada xaqiiqda go’aanka guriyeynta dadweynaha racfaanka .
Waxaa weheliya lacag dhimista kirada, waxaa laga yaabaa inaad xaq u yeelato kabitaanka kirada xaalladaha qaarkood sida soo socota:
Guriga waxaa wax yeeleeyey dabka ama daadka
Guriga haddii la dayactirayo adigoo weli halkaas ku nool
Adoo ah Sarkaalka Xiriiriyaha Deganaha ama xannaaneeyaha Degenaha
Inaad 100 sanno jirsato
Haddii aad u maleynayso in laga yaabo inaad xaq u yeelatay kabitaan kiro waa inaad la xiriirtid xafiiska guryaha ee xaafadaada.
Waxaad sidoo kale kala xiriiri kartaa tenants Union/Tenants Victoria wixii tallo ah
Public housing rents | Somali | June 2012